Tsvaga kuti WPSOLR inogona sei kuchengetedza yako yekutsvaga WordPress
musha » Nei WPSOLR?
Nyika-yepasi rose WordPress yekutsvaga haisisiri yakachengetedzeka kumakambani e Fortune 500 ane WPSOLR
Iko kutsvaga kwako kuri kutyora yako saiti yeWordPress?
Pamwe, kana yako saiti iine anopfuura mazana emazana machira kana zvigadzirwa, kana kana vashanyi vako vachitsvaga tsvaga nemhinduro.
MySQL haisi chishandiso chakakodzera
Kutsvaga-zvese-zvematsva ndiyo chaiyo chishandiswa
Nei isina mapulagi akachena
Sei usingabatirwe kutsvaga
Yakasimba asi inodhura
Kutsvaga kwe WordPress ne MySQL
Kuti tinzwisise kuti WPSOLR inogona sei kubatanidza Apache Solr uye iyo yekutsvaga kweWordPress, ngatitangei kunyura zvishoma munyika yakavanzika yeWordPress maficha maficha. Kana iwe ukapedza nguva shoma uchinzwisisa zvinotevera zvinyorwa, iwe unenge wakanyanya kuve wakashongedzerwa nezvombo kumisikidza WPSOLR. Saka, ngatiende!
Heano (akareruka) akajairwa WordPress ekutsvagisa ekufamba mafambiro matanho, akamiririrwa mune iyo cinematic pamusoro:
Peji yakatakura, semuenzaniso nemushandisi achidzvanya pane chinongedzo pane yako webhusaiti.
Iyo WordPress musimboti rinoburitsa peji url, ine zvese parameter. Semuenzaniso: /? S = tsvuku + shangu & post_type = chigadzirwa chekutsvaga kweWooCommerce.
Iyo url paramita inoshandiswa kuvaka WP_Query chinhu, yakakwira yakakwira WordPress api yekuvaka SQL mibvunzo.
WordPress inobereka chirevo cheSQL kunze kweWP_Query, uye inodaidza iyo database ine kurudyi SQL mutauro (MySQL, PostgreSQL,…). Iyi SQL inowanzo kuve yakaoma, uye inosanganisa mhedzisiro kubva kune akati wandei SQL matafura (sezvigadzirwa uye hunhu kuti utore ruvara uye saizi yeshangu).
Iyo database yeWordPress inoita chirevo cheSQL, uye inodzorera mhedzisiro, iyo yakachengetwa muWP_Query chinhu. Ziva kuti dzimwe nguva chete ma Ids ekudzoserwa anodzoserwa, izvo zvinotungamira kune yakawanda SQL yakaurayiwa kuti iwane mamwe mimwe mibairo.
WordPress ichaita izvozvi kurodha faira re php, rakatumidzwa template. Iyo template inochengeterwa pane iripo inoshanda theme dhairekitori. Ipi template inoremerwa zvinoenderana nechiyero template yeumambo (nzira yekubatanidza urls uye template faira mazita), kana pane iyo theme kana plugin's filters / zviito. Ziva kuti pane ese marudzi ese ekutsvaga matemplate, kubva pakutsvaga.php, kumhando dzemazita, rondedzero tag, uye nevamwe vazhinji.
Kutsvaga kweWordPress neWPSOLR
Kuenzaniswa ne chiyero chekutsvaga WordPress, nhanho idzo dzakasiyana:
WPSOLR iri kutsiva WP_Query chinhu neayo chaiyo subclass chinhu WPSOLR_Query.
WPSOLR_Query iri kutora paramita kubva kuurl, kubva WPSOLR PRO yekuwedzera, kana kubva kodhi yako wega wefa.
WPSOLR inovaka iyo Elasticsearch / Solr query ne Elastica php raibhurari / Solarium php raibhurari.
WPSOLR inobvunza iyo Elasticsearch / Solr index kuti iwane magwaro anokwana mubvunzo.
WPSOLR inoburitsa iwo maid id.
WPSOLR, ine chirevo chimwechete cheSQL, inotora mhando dzekutumira (positi, peji, chigadzirwa, kana chero fomu yekutumira) kubva kuWordPress database.
WPSOLR "inowedzera" iyo yepositi mhando zvemukati: geolocation daro, yakakwenenzverwa mazwi akakosha muchikamu,…
WPSOLR inochengetera zvinyorwa zvemhando
Kana iyo theme yetemplate yekutsvaga yatakurwa, inozvibata senguva dzose, isingazive kuti iyo mhando yekumisikidza iyo yainowana kubva kuiyo WordPress standard loop yakauya kutanga kubva kuElasticsearch / Apache Solr query.
WPSOLR inokurumidza sei ipapo?
Iwe zvimwe wakacherekedza kuti ikozvino, mibvunzo miviri inoitwa pachinzvimbo cheimwe mukutarisirwa kwakajairika: imwe kuenda kuElasticsearch / Solr index, uye imwe yekudzosera marudzi emaposita kubva kune eodhodhi ids.
Asi zvinokurumidza kwazvo, nekuti ukangowana huwandu hwakakura hwemhando dzepositi mudhatabhesi yako (zviuru zvishoma, kuzviuru zvakawanda), iyo Elasticsearch / Solr query iri inoshamisa nekukurumidza pane WP_Query SQL yakazara-mavara ekutsvaga.
Uye wechipiri mubvunzo wekudzosera matsimba emhando kubva kuma id inokurumidza kwazvo, sezvo ichibvunza pamatafura emadodhi, ayo akanyorwa.
Basa rakaoma, iro rekutsvaga-rizere mameseji, zvakaitwa naElasticsearch / Apache Solr, iyo yakavakirwa izvozvo chete.
Kuvandudza yako WordPress tsvaga
MySQL inogona kudzosera yechitatu kabinet yetambo yechipiri. Asi haigone kudzora zvakanaka iyo kabhodhi ine fayile ine musoro "MySQL haina kunaka nemavara".
WordPress yakavakirwa zvachose pane MySQL. Izvo zviviri zvekugadzira mapeji uye kutora ruzivo mune zvinyorwa.
Asi MySQL ndeyeRukama Dhatabhesi: iyo yakavakirwa nechinangwa chega chekutora dhata kubva kunongedzo.
Semuenzaniso, dzosa chinyoreso neID '345678', uye ese ayo akafanana emifananidzo ID.
Kudzosa data kubva mune zvinyorwa zvaro kunodaidzwa kuti "yakazara-zvinyorwa" kutsvaga. Ipo MySQL ichiuya neyakajairika-yekutsvaga yekuwedzera, haina kumbovakirwa icho chinangwa.
Saka, tsvaga muMySQL (uye WordPress) inononoka uye isiriyo.
Kuvandudza yako yekutsvagisa MySQL
Zvese zvaunotsvaga zviri muWordPress zvakanyorwa semavara, mune akareba kana mapfupi mazwi.
Iyo inogona kuchengetwa mumazita ekutumira, zvinyorwa zvemukati, mabhigi, zvikamu, zvigadzirwa zvechigadzirwa. Zvichingoenda zvakadaro.
Chishandiso chakakodzera chinofanirwa kukwanisa kutarisa mukati meaya mabhii ezvinyorwa, uye wozvifananidza nemubvunzo wemushanyi.
Mushanyi ari kutsvaga "Masokisi ejena" haana basa kana ruzivo rwacho rwakachengetwa seye WooCommerce Ruvara hunhu, kana mune rondedzero yechigadzirwa.
Iye anongotarisira mhedzisiro, asi nekukurumidza uye kwayo.
Uye "nekukurumidza uye kwakarurama" ndizvo chaizvo zvazviri kutsvaga-kwese kutsvaga. Chirongwa chinogona kutarisisa huwandu hwakawanda hwemavara akapatsanurwa, uye vozvifananidza nemazvo nemazwi emubvunzo.
Tsvaga muzvidimbu zvese zvemavara
Kutsvaga-yakazara-mameseji kunogona kutora zvinobudirira iyo positi kana peji kana chigadzirwa icho chine "Focus", kana "Zvinotarisisa".
Solr uye Elasticsearch, yemahara-yakasununguka-yakazara yakazara-mameseji software, vatungamiriri vekutsvaga.
Yakabatanidzwa neWordPress neWPSOLR, ivo vanogona kuita zvishamiso.
Solr kana Elasticsearch - makazara-mavara mhare
Kana zvasvika kune zvinoshamisa zvekutsvaga mazuva ano, makwikwi maviri anomuka pamusoro pevamwe: Apache Solr uye Elasticsearch.
Vaviri vanogovana injini imwechete, "Lucene".
Ose ari maviri akavakirwa kukurumidza uye kutsvaga kwechokwadi.
Zvese zviri mahara uye zvakasununguka-sosi: iwe unogona kuzvimisikidza pane sevha yako yemahara.
Izvo zviviri zvinogona kuvharwa nezviuru zveparamita: mitauro mumitauro makumi mashanu, zviso, zvimisikidzo, duramazwi, NLP. Zvichingoenda zvakadaro.
Asi, zvinotonyanya kukosha, bot dzakabatanidzwa zvisina kusimba kuWordPress, nekuda kweWPSOLR plugin.
Hapana imwe plugin inozviita: iwe unogona kutsvaga neElasticsearch muFrench, uchitsvaga muchiJapan naSolr.
Edza Elasticsearch kana Solr, senge Fortune 500
Nei usingakwanise kushandisa yakachena plugin
Ma plugins akachena anogona kuvandudza yako yekukurumidza nekukurumidza, kusvika kune imwe nhanho chete.
Tinogona kutaura, kugadzirisa vamwe:
- AJAX Tsvaga Pro
Icho chikonzero ndechekuti ivo vachiri kushandisa MySQL kupa simba kutsvaga kwako. Uye sezvatakataura, kutsvaga hakusi kwakanaka midziyo yeMySQL. Ichaputsa nekukurumidza kana data rakawandisa richitsvaga, kana vashanyi vakawandisa vari pane yako saiti. Ndeipi yakaipa, nekuti iwe unoda vakawanda vashanyi, aiwa?
Asi zvakare, ivo havakwanise kukwikwidza maererano nemaitiro uye kumhanya neElasticsearch kana Solr. Iwo mairi mhuka, yakavakwa ne2K yemitsetse yekodhi, nemazana evandudzi. Uye chete nechinangwa chimwe chete: kupa chishandiso chakanakisa muNyika.
Saka, panzvimbo yekudzoreredza vhiri, WPSOLR yakasarudza kushandisa Elasticsearch uye Solr.
Iwe unowana hwakanakisisa pane hwese, asi nekubata kuri nyore. Hapana chikonzero chekuva nyanzvi pakutsvaga.
Uye yeuka, isu tiripo kuti tigadzirise kutsvaga kwako nemuedzo wako. Zvemahara!
Edza chimwe chakasiyana
WPSOLR yakasarudza kubatana neyemhando yepamusoro ye teknolojia yekutsvaga yakanakisa. Panzvimbo pekugadzira zvakare vhiri.
Ne WPSOLR, usasarudze pakati pekutsvaga kukuru uye bhiri diki. Tsvaga yekutsvaga yepasi rese, pamutengo wediki plugin.
Nei usingakwanise kushandisa SaaS yakavakirwa kutsvaga
SaaS yakaitirwa ekutsvaga masevhisi akanaka, kana uine diki saiti, kana homwe hombe.
Vamwe vakaita sevhisi kunze uko:
- Wedzera Kutsvaga
Mitengo yavo inoenderana nekushandisa kwako sevhisi: huwandu hwedata "yakanyorwa" (yakachengetwa), huwandu hwemibvunzo, huwandu hwezvabuda, nhamba yekudzokororwa kwedata rako. Zvichingoenda zvakadaro.
Saka, kana iwe uine mashoma data, uye vashoma vashanyi, vanogona kuva akanaka kwazvo zvechokwadi.
Asi ziva kuti kana munhu anokambaira, seGoogleBot kana imwewo bots, auya kuzoshanyira mapeji ako ekutsvaga webhusaiti, inozowedzera kune yako yakagarwa bhiri pakupera kwe mont.
Kana iwe uine homwe hombe, iwo masevhisi anogona kuve akanaka. Kusvikira iwe uchida zvimwe zvinhu, zvakanyanya kugadzirisa kwekutsvaga kwako: haugone kuvhura iro bhokisi, nekuti sevhisi inoitirwa uye hauna mukana kune "injini" kumashure.
Zvakare, mazhinji emasevhisi aya haana kutsaurirwa kune WordPress. Ivo vanonongedza marudzi ese evatengi, kusanganisira Drupal, Magento, kana kunyange HTML masosi.
Zvinoreva kuti kunzwisisa kwavo kweShokoPress zvinyengeri kwakanyanya. Uye dzimwe nguva, ivo havana kana kupa iyo WordPress plugin, kana kungoita marangwanda eiyo plugin isingachengetwe kana kuvandudzwa sezvatinogona kutarisira.
Ne WPSOLR, iwe unowana iyo injini injini yekutsvaga yakatorwa, nekuda kweElasticsearch naSolr. Asi iwe unovaisa mahara pane seva yako: mutengo unokwanisa kunge uri 10-100 nguva yakadarika pane nemamwe anozivikanwa SaaS makambani ekutsvaga.
Cheka iwe bhiri na10-100
Yakasimba uye yakachipa kupfuura iwe yaungatarisira
Zviri nyore kuti umhanye, pane inodhura server ine zvinyorwa zvishoma chete kana vashoma vashoma panguva imwe chete
Asi ko kana iwe uine zviuru, kana mazana ezviuru ezvinyorwa kana WooCommerce zvigadzirwa sevamwe vatengi vedu?
Uye chii kana paBlack Friday iwe unongoerekana wawana mazana evanoshanyira vashanyi, asi kutsvaga kwako kunotyora server yako pasi?
Uye zvakadiniko kana iwe usati uchinge uine bhizimusi rekushandisa zviuru mwedzi wega wega pamutengo wakatsaurwa wemahara, kana masevhisi akabatwa?
Ne WPSOLR, hapana kunetseka!
Vamwe vatengi vanogara vachifara nemazana ezviuru ezvigadzirwa, kana maposita, kana misoro.
Vamwe vatengi vane mazana evashanyi zuva rega rega, pasina kudzora zvishoma.
WPSOLR inoda zvakachipa zvemahara, uye kwete zvinodhura pazvinodiwa kunyoreswa.
Zvakanakisisa hazvisisiri zveumbozha
WPSOLR inogona kutsvaga muhuwandu hukuru yezvinyorwa, nehuwandu hukuru hwevashanyi, pane iyo yakachipa michina, kune kunyoreswa kudiki kunyoreswa. Chii chakanak?